सरकारको ध्यानाकर्षण गराऊदै चीनबाट नेपाली डाक्टरको यस्तो सन्देश « Dhankuta Khabar
सरकारको ध्यानाकर्षण गराऊदै चीनबाट नेपाली डाक्टरको यस्तो सन्देश
प्रकाशित मिति :9February, 2020
नमस्कार, मेरो नाम डा प्रिन्स रौनियार, हाल चीनको हुबेइ प्रान्तमा मास्टर्स पढ्दैछु। गत डिसेम्बरको मध्यबाट यो प्रान्तमा सुरु भएको कोरोना भा,इरसले ठूलो रुप लिइरहेको छ, जसबाट हालसम्म ८ सयभन्दा बढीको मृ,त्यु भइसकेको छ। मृ,त्यु हुनेमा हामी बसेको वुहान सहरकै मानिस बढी छन्। बाहिर म,र्नेको संख्या एकदमै थोरै छ। वुहानलाई तत्काल लकडाउन (नि,षेधित क्षेत्र) घोषणा गरेर बाहिर जान रो,क लगाएपछि बाहिर धेरै सं,क्रमण फैलन पाएन।
श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने यो भा,इरस चमेरोबाट मानिसमा सरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र अमेरिकी सीडीसीले पनि पुष्टि गरिसकेका छन्। यसको सं,क्रमण मानिस–मानिसबीच एयर ड्रपलेट्स (सं,क्रमित मानिसले हाँछ्यु गर्दा नजिकको हावामा फैलने थोपाहरु) र स्प,र्शबाट फैलन्छ। कुनै स्थानमा यो भा,इरस दिसामा पनि भेटिएको खबर छ। तर यो रोग हावाबाट कहिल्यै फैलन सक्दैन किनकि यस्ता किटाणु हावामा बाँच्न सक्दैनन्। यो भा,इरसलाई बोक्न जीवजन्तु वा मानिस नै चाहिन्छ।
यो भा,इरसको हुर्कने अवधि (इन्क्युबेसन) १४ दिन भनिएको छ। यसको अर्थ यदि एउटा स्वस्थ मानिसलाई सं,क्रमण भएको खण्डमा लक्षण देखिन सं,क्रमण भएको १ दिनदेखि १४ दिनसम्म लाग्न सक्छ। कसैले छिटो लक्षण देखाउछन् भने कसैले ढिला। यसको अर्थ कोरोना भा,इरस लक्षण नदेखिएका मान्छेले पनि फैलाउन सक्ने देखियो।
अब सबैले बुझ्नुपर्छ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भनेको के हो?
यदि सं,क्रमण फैलिएको ठाउँमा बस्दै आएका मानिस आफ्नो देश फर्किनु परे स्वदेशको स्वास्थ्य निकायले उनलाई स्वास्थ्य जाँच गरि सं,क्रमणको लक्षण छ–छैन भनेर हेर्छ। लक्षण नदेखिए तिनलाई यस्तो व्यवस्थित ठाउँमा राखिन्छ, जहाँ बाहिरी मान्छेसँग निकट सम्पर्क नहोस्। इन्क्युबेसन अवधि सम्मका लागि व्यक्तिलाई कडा निगरानीमा राखिन्छ। उदाहरणका लागि कोरोना भा,इरसलाई लिन सकिन्छ। यसको इन्क्युबेसन अवधि १४ दिन हुन्छ। यदि वुहानबाट नेपाल फर्कने मानिसलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य जाँच गर्दा लक्षण नदेखिए पनि १४ दिनका लागि क्वारेन्टाइनमा निगरानीमा राखिन्छ।
यदि यो १४ दिनमा लक्षण देखिएन भने पूर्ण रुपमा ढुक्क भएर समाजमा घुलमिल गर्ने अनुमति दिइन्छ। किनकि ती व्यक्तिमा सं,क्रमण भएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। तर यदि १४ दिनभित्रै सं,क्रमणको लक्षण देखिए तुरुन्त एउटा अस्पतालमा लगिन्छ र आइसोलेटेड वार्डमा राखिन्छ। अस्पतालमा सं,क्रमितलाई कसैले छुने अनुमति हुँदैन। यसलाई आइसोलेसन भनिन्छ।
नेपालमा अहिलेसम्म आफ्नो जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको अनुभव छैन। त्यसकारण हामीलाई उ,द्धार गर्न ढिलाइ भएको बुझ्न सकिन्छ। नेपाली समाजमा विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने नेपालमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बारेमा नै पूर्ण जानकारी छैन। तर नयाँ कुरा सबैले सिक्नुपर्छ र जान्नु पर्छ।
अब कुरा गरौं यसको उपचारका बारेमा।
नेपालमा विज्ञले नै भन्न गरेको सुनिएको छ– चीनले नै बचाउन नसकेका बेला नेपालले कसरी बचाउन सक्छ? एउटा कुरा सबैले बुझ्नु के जरुरी छ भने संसारमै यसको सटिक उपचार कुनै देशसँग पनि छैन। हाल यसको उपचार भनेकै लक्षणअनुसार बिरामीलाई औषधि दिनु हो। यसको अर्थ ज्वरो आए सिटामोल दिने, रुघाखोकी लागे त्यसअनुरुप औषधि दिने, श्वास फेर्न गा¥हो भने अक्सिजन दिने, निमोनिया लाग्यो भने त्यसअनुरुप औषधि दिने, आइसियुमा बिरामी राख्ने, र जरुरी परे भेन्टिलेटरमा राख्ने।
के नेपालका अस्पताल यो उपचारका लागि सक्षम छैनन्? सबै देशमा यसरी नै उपचार भइरहेका बेला नेपाली विज्ञले यस्तो तर्क दिनु कहाँसम्म औचित्यपूर्ण छ?
अब हामी वुहानलगायत हुबेइ प्रान्तमा रहेका नेपालीको विषयमा कुरा गरौं। वुहानलगायत छेउछाउका सबै सहर लकडाउन भएको आज १७ दिन भैसकेको छ। यसको अर्थ हामीले इन्क्युबेसन अवधि पार गरिसकेका छौं र हामी सबै नेपाली अहिलेसम्म स्वस्थ छौं। हामीले आफूलाई कोठामा थुनेर राखेका छौं। समाजमा घुलमिल गरेका छैनौं। यदि कोही संक्रमित भएको भए अहिलेसम्म चीन सरकारले आफैं अस्पताल लगिसकेको हुन्थ्यो। तर हाम्रो आफ्नै सतर्कताले गर्दा कोही पनि संक्रमित भएका छैनौं। कोही लुकेर बस्न सक्दैनन्। खानाको अभाव अहिले छैन किनकि हामीले एकैचोटी २–३ साता पुग्ने गरी सामग्री जुटाएर राखेका छौं। पानीको अभाव भने अवश्य छ। शुद्ध पानीसमेत पिउन नपाएको एक साता भइसकेको छ। धारामा आउने बोरिङ्गको पानी उमालेर पिउनु परेको छ। तर खाने सामग्री त बिस्तारै सकिन्छ र किन्न बजार जानैपर्छ। तर, यो बेला बजार जानु भनेको सं,क्रमणको जोखिम उठाउनु हो।
अहिले हाम्रो उ,द्धार गर्न जो,खिमपूर्ण छैन भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो भन्ने आशा गर्दैछु। तर अब जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै हाम्रो सं,क्रमणको सम्भावना धेरै हुन्छ भनेर सबैले बुझ्नु पर्छ। उ,द्धारका क्रममा कोही पनि लुकेर भाग्न सक्दैन। किनभने चीनको वायु अड्डामा सबैको पूर्ण स्वस्थ जाँच हुन्छ र कसैमा सं,क्रमण देखिए तुरुन्त अस्पताल लगिन्छ र स्वदेश फर्किने अनुमति पाउँदैन। चीनबाट नेपाल फर्किएपछि पुनः पूर्ण स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ र सं,क्रमण देखिए आइसोलेसनका लागि अस्पताल लगिन्छ। सं,क्रमण नदेखिए पनि क्वारेन्टाइनका लागि व्यवस्थित ठाउँमा १४ दिनका लागि राखिन्छ।
यति धेरै जाँचबाट हामी गुज्रिरहँदा कसरी कसैले हामीलाई ‘लिभिङ बायोलोजिकल ब,म’ को संज्ञा दिन सक्छ?
तर अहिले ‘लिभिङ बायोलोजिकल ब,म’ भनेका विनारोकटो,क र स्वास्थ्य जाँच चीनका अन्य सहरबाट नेपाल भित्रिरहेका मानिस हुन्। त्यसरी भित्रिरहेका नेपाली, चिनिया र अन्य विदेशीमध्ये कोही पनि सं,क्रमित भएमा नेपालमा पनि फैलन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्।
यो भा,इरसको लक्षण तत्काल नदेखिन पनि सक्छ। यसको इन्क्युबेसन अवधि १४ दिनको हुन्छ। खुल्ला रुपमा नेपाल भित्रिसकेपछि यदि कसैमा लक्षण देखिए के गर्ने? नेपाल सरकार र जनताले वुहानलाई मात्र लक्षित गरि यिनीहरुलाई नेपाल भित्रिन दिनु हुँदैन भन्नु ठीक होइन। कोरोना भा,इरस वुहानमा मात्र हैन पुरै चीनमा फैलिइसकेको छ। सरकारले त तुरुन्त चीनबाट नेपाल भित्रिने सबै मान्छेको कडा रुपमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने थियो। कतै ढिलो त भएन? यो स्थिति कदापि नआओस्।
वुहानलगायत सबै हुबेइ प्रान्तका नेपाली अहिलेसम्म संक्रमित छैनन्, त्यसैले हामी ड,राएका छैनौ। तर यदि कसैलाई सं,क्रमण भैहालेमा हामी कति त्र,सित हुन्छौ विचार गर्नुस। श,वसमेत घरका मान्छेले हेर्न पाउँदैनन्। यो भा,इरस ठीक हुन कम्तिमा पनि २–३ महिना लाग्न सक्छ। अब हामी लामो समय थुनिएर बस्न सक्दैनौ। खानाको अभाव भएपछि बजारमा निस्कन पर्ने हुन्छ । अहिले त जसोतसो बसेकै छौ । तर भविष्यलाई मध्यनजरमा राखेर सोचौं हाम्रो के हुन्छ स्थिति? सबै मुलुकले यो कुरा सोचेरै आफ्ना जनताको उ,द्धार गरिसके। हामीले कहिले बुझ्ने? गर्मीसँगै यो भा,इरसको प्र,कोप घट्ने तर्क आइराखेको छ। के अब हामीले गर्मी महिना नै कुर्नुपर्ने हो त?
सरकारले तुरुन्त उ,द्धार नगरेकोमा दुःख लागेको छैन, न त जनताको वि,रोधले नै दुःख लागेको हो। अझ बढी दुःख लाग्यो नेपालका ‘विज्ञ’ डाक्टरहरुको तर्कले। उनीहरुले यसबारेमा राम्ररी बुझेर आफ्नो तर्क दिनुपथ्र्यो। कोही भन्छन्– नेपालले उपचार गर्न सक्दै सक्दैन। कोही भन्छन्– चीनमै छाडेको राम्रो। कोही क्वारेन्टाइनमा राखेर केही काम लाग्दैन र कोही भन्छन् उनीहरु ‘लिभिङ बायोलोजिकल ब,म’ हुन्। यो सब तर्क विभिन्न डाक्टरका हुन्।
त्यसैले तपार्इहरुसँग विनम्र अनुरोध छ, यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विचार गर्नुस्, सम्झनुस र सम्झाउनुस्। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अर्थ सम्झिनुस् र सम्झाउनुस्, यसरी जथाभावी तर्क–वितर्कले त्रास नफैलियोस्। यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्।
भक्तपुर । महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमी र मातहतमा कार्यरत ६३ जना प्रहरीमा कोरोना
महालक्ष्मी नगरपालिकाका सवैको पीसीआर नतिजा यस्तो आयो
आश्विन ४,धनकुटा । पछिल्लो पटक कोरोना जाँचका लागि पिसिआर नमूना संकलन गरि पठाईएको धनकुटाको
चाैविसे गाउंपालिकाका दुईजनाले काेरोना जितेर फर्किए घर
अशाेज २,धनकुटा । धनकुटाकाे चाैविसे गाउंपालिकाका दुईजनाले काेराना जितेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन !, हेर्नुहोस् असोज ५ गते…
बढ्दै धनकुटामा समेत चहल पहल
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाद्वारा सचेतना मुलक पर्चा पम्प्लेट वितरण
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन !, हेर्नुहोस् असोज
तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् असोज